Warka - Dr. Steve Dale —— Daaweynta khaldan ee milkiilaha Eyga macnaheedu waa eeyaha si tartiib tartiib ah ayuu u dhaawacmay
Caan ka noqoshada adduunka ee xayawaanka rabaayadda ah, waxay dhab ahaantii muujineysaa in xiriirka ka dhexeeya dadka uu sii kala fogaanayo. Ma aha oo kaliya waayeelka buulkoodu buuran yahay ee kelinimada ah. Sababtoo ah taageerada waxqabadyada jahawareerka bulshada kuma filna in laga yareeyo buuqa, xayawaanku waa sabab muhiim u ah isbeddelka dhalinyarada. Mid, sidaa darteed sameynta xiriir bulsheed gaar ah-xayawaanku waxay noqdaan xubin qoys.
Isbitaalka American Pet Hospital Banfield ayaa shaaca ka qaaday in sida lagu sheegay sahan, in badan oo aan isku buuqsanahay, aan inbadan jeclaanno inaan waqti la qaadano xayawaannada guryaha lagu haysto. Sababtoo ah way na daaweyn karaan. Si kastaba ha noqotee, barnaamijka barnaamijka 'Steve World' ee raadiyaha adduunka, (Animal Sanctuary and Family Colony) oo ah aasaasaha Ellie Phillips ayaa yidhi,Markaan diiqadeynno, xayawaannadayada guriga ayaa fiiro gaar ah u leh, waxayna ku jiraan cadaadis.”
Xakamayn la'aantu sidoo kale waa sabab aad u muhiim u ah walwalka, iyo mulkiilaha xayawaanka, shaki kuma jiro inuu isagu leeyahay kantaroolka ugu sarreeya xayawaanka laftiisa. Xitaa haddii aan xakameyn lahayn nolosha ama shaqada, waxaan si dadban ama si ku meelgaar ah uga yareyn karnaa walaaca adoo kor u qaadaya xakameynta xayawaanka rabaayadeed.
Si kastaba ha noqotee, in kastoo xayawaanku ay naga caawiyaan yareynta buufiska, haddana waxaan inta badan iska indhatirnaa in qayb ka mid ah dabeecadda milkiilaha ay sidoo kale sabab u tahay walaaca eyga.
Dabeecadaha noocee ah ee milkiilaha ayaa u keena xayawaanka inay dareemaan culeys?
Akhlaaqda 1aad: Kusoo dhawaaw eeyga si caadi ah
Muhiimadda ugu weyn ee halkan ku taal ayaa ah marka aad eeyga soo qaadatid oo aad gurigaaga aadatid, eygu wuxuu noqonayaa mid aan la aqoon oo aan ku raaxeysan doonin deegaanka cusub ama milkiilaha cusub, wuxuuna culeys weyn ku hayaa qalbigiisa. Milkiilayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay rabaan inay si fiican u bartaan eeyga sida ugu macquulsan, sidaa darteed waxay u dhowaadaan eeyga ka hor inta eeyga aan loo isticmaalin deegaanka cusub (ma ahan xaasidnimo oo ma doonayo inuu xayawaan), laakiin tani maahan mid lagu talin karo.
Talada khabiirka dabeecadda Tianxiahui: Haddii eygu doorbido inuu keligiis joogo geeska, sida milkiilaha, waa inaad siisaa raaxo habboon, maxaa yeelay raaxada ayaa ah waxyeellada cadaadiska dabiiciga ee eyga. Daraasaduhu waxay muujiyeen in heerka cortisol ee timaha milkiilayaasha eyga ay aad ugu dhowdahay tan eyda. Heerarka walaaca ee labadaba waa la isku duubay ama isku xiran yahay. Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay in eeyaha iyo milkiilayaashooda ay saameyn ku yeeshaan midba midka kale. Markaa walbahaarka fekerka ayaa sidoo kale leh saameyn guud Marka ay jiraan xaalado wanaagsan oo deegaanka ah, barkinta jilicsan ayaa loo isticmaali karaa si ay uga caawiso eeyga inuu nasto. Marka aysan awoodin inay isticmaasho barkinta, waxaa loo oggolaan karaa inay gasho jawi deggan oo xasilloon. Ustadku wuu u wici karaa eeyga si tartiib ah wuxuuna fiiro gaar ah u leeyahay falcelintiisa waqti kasta ka hor inta uusan sameynin dabeecado dejinaya sida salaaxista.
dhaqanka 2: khibrad la’aan
Milkiileyaasha cusub waxay lahaan doonaan waxyaabo badan oo aysan fahmin, gaar ahaan la'aanta sharciyo la xiriira la dhaqanka eyda. Tusaale ahaan, mararka qaar eeyaha waxay leeyihiin dhaqan isku mid ah laakiin duruufo kala duwan awgood, abaalmarinta eeyga ayaa mararka qaar noqda ciqaabta milkiilaha. Tani waxay sababi doontaa in eey runti awoodin inuu fahmo in dhaqankiisu sax yahay ama khaldan yahay? Waxay ku soo kordhin doontaa cadaadis gaar ah eeyga eyga xitaa wuu ka bixi karaa xakamaynta.
Talada khabiirka dabeecadda Tianxiahui: Wax badan ka baro eeyaha. U ogolow eeygu inuu saaxiibo kuu noqdo oo uu xiriir dhow kula yeesho ka dibna uu talaabo talaabo ah u qaado qalbiga eyga. Isla mar ahaantaana, caawimaad ka raadi milkiilayaasha kale ee eyda leh khibradaha si ay u fahmaan shakhsiyaadka guud ee eyda kala geddisan.
U diyaari qaar ka mid ah alaabada carruurtu ku ciyaarto ee is-dhexgalka leh si eygu uga faa'iideysto dabeecadda dabiiciga ah ee eygu u leeyahay ciyaarista iyo wax cunidda. Iyo sababta oo ah toy-gaan wuxuu ku jiraa qaab laf oo wuxuu leeyahay midabyo dhalaalaya oo soo jiidan kara dareenka eeyaha. Waxaan u baahanahay inaan si joogto ah u nadiifino toy-gan. Isticmaalka muddada-dheer wuxuu ka caawiyaa inay ilkaha nadiif ahaadaan oo ay ka madhan yihiin huurada iyo taarikada. Isla mar ahaantaana, waxay yareyn doontaa halista eygu jabiyo guriga.
Habdhaqanka 3aad: Qaab qaldan oo ciqaab ah
Marka eey tababarayaan ama wax khaldamayaan, milkiiluhu wuxuu guud ahaan isticmaali doonaa ciqaab si uu eeyga u ogeysiiyo in aan la ogoleyn. Laakiin qaadashada ciqaabtu waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Qaniinyada, qodida, ciyo, iyo cayrsashada waa dabeecadaha dabiiciga ah eeyaha, markaa uma baahnid inaad walwal qabtid.
Talada khabiirka dabeecadda Tianxiahui: "Habka wareejinta" waa la qaadan karaa. Marka eeyadu ay rabaan inay qaniinto alaabta guriga ama wax, waxaan u dhaqaaqi karnaa si waalli ah u boodbooda kubbadaha wareega halkii aan ka ciqaabi lahayn.
Kani waa kubbad toy ah oo si otomaatig ah oo caqli ku dheehan tahay xayawaanka xayawaanka u ah si eygu u farxo xittaa marka aan lala socon. Kubaddu way sii socotaa sida qof u ciyaarayo dhuumasho-iyo-doonba. Kaliya maahan iney tamar badan u isticmaasho eeyaha waxayna ka celisaa inay miisaanka koraan oo waxay ku haysaa guriga adeecidiisa laakiin sidoo kale waxay eeyaha ka farxisaa. Waxay kaloo farxad gelisaa xayawaanka. Wax iska caabbintu asal ahaan waa eber.
Habdhaqanka 4aad: Daaweynta rabshadaha leh
In kasta oo eeyga uusan nala xiriiri karin, eeyga wuxuu ku xukumi karaa codkeena. Waad garaaci kartaa wax yarna canaanan kartaa marka eygu wax khaldo. Eeygu wuu garan karaa inay khalad tahay inuu dareemo dhawaaqa milkiilaha. Laakiin ha ku daaweynin rabshad. Tani waxay ka dhigi doontaa oo kaliya cilmu-nafsiga eeyga baqasho oo ka dhigaysa masaafada u dhaxeysa adiga iyo eeyga aad iyo aad u sii fog.
Talada khabiirka dabeecadda Tianxiahui: Eeyadu waa saaxiibadeena wanaagsan waxaanan dooneynaa inaan ku noolaano nolol wada noolaansho leh. Waxaan aaminsanahay in eeyaha badankood ay si hoose u jecel yihiin milkiilayaashooda. Xitaa haddii milkiiluhu sameeyo dhaqammo aan habboonayn, eeyadu si dhakhso leh ayey u illoobi doonaan oo cafiyi doonaan. Marka lagu daro u fiirsashada caafimaadka maskaxda eeyga, caafimaadka jirka lama iska indho tiri karo. Waqtiyada caadiga ah, waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa caafimaadka cunugga eeyga oo aan siino eyga jimicsi ku filan si eeyga uu noo raaci karo isagoo caafimaad qaba oo faraxsan.